UNieves Herrero: "Andazi ukuba ndingaziqamba njani, ndinokukuxelela into endiyenzileyo" | Uncwadi lwangoku
UNieves Herrero: iincwadi
UJuan Ortiz | 12/08/2021 21:20 | I-Biography, Iincwadi, Inoveli
Xa ubuza kwiwebhu malunga ne "Nieves Herrero Libros", iziphumo zikhomba kwinoveli yamva nje yeMadrilenian: Ezo ntsuku ziluhlaza (2019). Le ngxelo yembali yayimangalisa kakhulu kwihlabathi loncwadi, kwaye yayonwabela ukwahluka kwezimvo kubagxeki. Emsebenzini, umbhali usibonisa kwakhona iyelenqe kunye nabalinganiswa bokwenyani kwaye okunongwe ngokuthinta ukukhanya kweentsomi, apho aphakamisa khona abafazi ababalaseleyo bexesha elidlulileyo.
Inoveli Oko kuphuka kwenyanga (2001) yayilinyathelo lokuqala likaHerrero kuncwadi. Emva kwesi siqalo, iSpanish yamkelwe kudliwanondlebe no ILa Voz de Galicia ube ngumbhali weendaba. Ngelo xesha wathi: “Andinakukhetha, kuba ndiyintatheli. Andazi ukuba ndingaqamba njani, ndinokuxelela kuphela oko ndikhe ndadibana nako, ndakuva okanye ndixelelwa kona ”.
1 Iincwadi ezilungileyo zikaNieves Herrero
1.1 Inyanga eyaphukileyo (2001)
1.2 Intliziyo yaseIndiya (2010)
1.3 Oko Amehlo Akhe Afihlayo (2013)
1.4 Njengokuba kwakungekho ngomso (2015)
1.5 Ezo ntsuku zeBlue (2019)
2.1 Iincwadi zombhali
Iincwadi ezilungileyo zikaNieves Herrero
Oko kuphuka kwenyanga (2001)
Yincwadi yokuqala kaNieves Herrero. Incwadana isekelwe ekuqhawuleni umtshato kwisibini esinegqwetha laseMadrid, abaye bahlala iminyaka elishumi elinesine. Nangona libali eliyintsomi, maninzi amava alo mbhali kulo; Kule meko, wavuma: "... yayiphantse ibe lunyango, kuba kwakufuneka ndiguqulele into endandinayo ngaphakathi entweni kwaye ndazalisa amaphepha ngeemvakalelo."
U-Beatriz no-Arturo batshatile kwaye banentombi eneminyaka emibini ubudala, UMonica. Ngaphandle kokuyikrokrela, umfazi ufumanisa ukuba umyeni wakhe akathembekanga kuye, imeko ewutshabalalisa ngokupheleleyo. Ke ngoko, uthatha isigqibo sokufaka kwangoko ibango loqhawulo-mtshato kwaye acele ukugcinwa kwentombi yakhe encinci. Yiyo le ndlela yokuzahlula kunye nokudana kukaBeatriz, ojongene nokuzikhusela kwakhe, eboniswa ngokweenkcukacha.
Oko kuphuka kwenyanga
Intliziyo yaseIndiya (2010)
Yinto enomdla kunye nenoveli yothando enayo protagonista a ULucas Millán. Oku ufumana ingozi embi kwaye kufuneka afakelwe ngokukhawuleza. Njengokuba umhla wokugqibela wotyando sele uza kufikelelwa, oogqirha bayayifumanela intliziyo lo mfana. Ungenelelo lwenziwa ngaphandle kokukrokrela ukuba imvelaphi yelungu iya kubuchaphazela ubomi bukaLucas.
Inkqubo ibe yimpumelelo. Nangona kunjalo, Ngelixa lo mfana echacha uqala ukuba neenkumbulo ezingaqhelekanga kunye neemvakalelo ezingenakuqondakala. Kungekudala, ufumanisa ukuba yonke into inxulunyaniswa nentliziyo ayifumeneyo- yeyomntu waseMelika waseMelika- kwaye ngenxa yoko kufuneka azalisekise injongo ebalulekileyo. Kwangelo xesha, uqhekekile phakathi kwezibini zothando, ezomfazi ebomini bakhe kunye naleyo inqwenelwa yintliziyo yakhe, ekude kakhulu kuye.
Intliziyo yaseIndiya (Iintsana ...
Oko amehlo akhe ayefihlekile (2013)
Ingxelo malunga nokuthandana ngasese phakathi kweMarchioness Sonsoles de Icaza kunye nomphathiswa uRamón Serrano Suñer Usibali kaFranco. Zombini zazingamanani abalulekileyo exesha lasemva kwemfazwe eSpain, kokubini kwezentlalo nakwezopolitiko. Inoveli yahlengahlengiswa kwimisebenzi yenkonzo ngo-2016, yasasazwa nguTelecinco kunye no-Blanca Suárez, uRubén Cortada noCharlotte Vega.
Ibali liqala nini UCarmen - intombi yabalinganiswa abaphambili-Udibana nentatheli uAna Romero, obhala iimemori zakhe. Kwibali lakhe Usixelela ukuba wafumanisa njani ukuba uMarquis Francisco Diez de Rivera wayengenguye utata wakhe kwaye wayeyimveliso yokuthandana phakathi kukanina noRamón Serrano Suñer. Ukongeza, uchaza ukuba-kamva-wajongana njani nokuba uthandana nomntakwabo.
Emva koko, ingxelo ibuyela ku-1940, xa kwindibano yoluntu ephezulu Abaxhasi bayazi kumphathiswa obalulekileyo kaFrancoist URamon Serrano Suñer. Zombini zilungisiwe kwaye baqala ukuthandana ngomphunga ngokufihlakeleyo. Emva kweminyaka emibini enomdla, amarhe obudlelwane babo aphuphuma kwizitalato zaseSpain, imeko apho uFranco ahlukanisa ngokulula umlamu wakhe eofisini.
Oko Bafihla ...
ngokungathi ngomso awukho (2015)
Yiyo inoveli esekwe kwibali lothando que yayikhona phakathi komlingisi u-Ava Gardner kunye nomlobi weenkunzi waseSpain uLuis Miguel Dominguín. Eli bali libandakanya ubudlelwane bokuqina kwesibini esikhokelayo, ukongeza kwezinye iinkcukacha zobomi babo bobuqu. Ngendlela efanayo, ubunyani beSpain phantsi kolawulo lobuzwilakhe lukaFranco luyaboniswa, emva kweminyaka engaphezu kweshumi emva kokuphela kweMfazwe yamakhaya.
Eyaziwayo UAva Gardner ufika eSpain ayokuphumla emva kwefilimu yakhe yamva nje. Okwangoku, unamahla ndinyuka nomyeni wakhe -uFrank Sinatra-, ke iintsuku ezimbalwa eMadrid ziya kuba zilungile kuye. Lixesha lonyaka xa yonke into iintyatyambo, indawo efanelekileyo evulekileyo ukuvutha kothando kunye nomnqweno phakathi komdlali weqonga kunye noLuis Miguel emva kokudibana nokujonga kwabo okokuqala.
Njengokuba bekungekho ...
Ezo ntsuku ziluhlaza (2019)
Yeyona noveli yamva nje ngumbhali. Kwicatshulwa kunjalo Ubalisa ibali lembongi kunye nombhali wemidlalo uPilar de Valderrama. Eli yelenqe lityhila imfihlo eguqukayo: inenekazi, lona, ​​nguGuiomar, Ndithelekelele U-Antonio Machado. Isihloko somsebenzi sivela kwisiqwenga sombongo ofunyenwe kwisuti enxitywe ngumSpanish ngomhla wokubhubha kwakhe, kwaye ufundeka ngoluhlobo: "Ezi ntsuku ziluhlaza, eli langa lobuntwana."
UHerrera wanxibelelana no-Alicia Viladomat - umzukulwana kaPilar- owayefuna ukubamba iinkumbulo zikaninakhulu ezizayo. Kweli bali lide, Kuchazwa indlela imbongi esencinci-emveni kokufunda ngokungathembeki komyeni wayo- ethatha isigqibo sokuya kubona iiklasi kunye noMachado. Emva kokudibana, bobabini baziva benxibelelana ngokunzulu, kwaye olo thando lweplato lwakhuthaza imibongo emininzi yombhali.
Ezo ntsuku ziluhlaza (MAXI)
Intatheli kunye nombhali waseSpain uNieves Herrero Cerezo wazalwa ngo-Matshi 23, 1957 eMadrid. Ngo-1980, waphumelela isidanga sobuntatheli kwiYunivesithi yaseComplutense yaseMadrid. Kwiminyaka emibini kamva, waphumelela njengegqwetha kwiYunivesithi yaseYurophu yaseMadrid. IHerrero inembali ende kwilizwe lobuntatheli, phantse iminyaka engama-35 yomsebenzi.
Caphula uNieves Herrero
Ngexesha lomsebenzi wakhe uhambe kwimithombo yeendaba eyahlukeneyo, ezinye zazo: iAntena 3 Radio, TVE, RNE, Telecinco kunye neOnda Madrid. Ukwengeza, Uqaqambisa ukungenelela kwakhe kwiinkqubo ezahlukeneyo kunomathotholo nakumabonakude, Inikezelwe yona ngezihlandlo ezahlukeneyo. Okwangoku, uyalela kwaye abonise IMadrid ngqo yi Idiza laseMadrid kwaye uyasebenzisana Iyure ye1 Kwitshaneli I1
Ukusukela ngo-2001, udibanisa umsebenzi wakhe wobuntatheli noncwadi, Intsimi apho ikwenze umsebenzi ophumeleleyo. Iincwadi ezisibhozo zizonke, umbhali waseSpain ufumene amakhulu abafundi, abonwabela amabali akhe anomdla nahlukileyo. Uninzi lwemisebenzi yakhe lusekwe amacebo embali ehonjiswe ngeentsomi, phakathi kwazo kuyabonakala: Oko amehlo akhe ayefihlekile (2013).
Ngexesha lomsebenzi wakhe, uNieves Herrero wayesaziwa ngokuphakamisa abantu basetyhini. Ke, Uninzi lwamabali akhe lwenziwa ngabafazi. Ngokufanayo, Ubhale kwidayari El umhlaba ngaphezulu kwe-100 lodliwanondlebe lubiziwe: "Ndedwa nabo ...", ezenziwa kwamanye amanenekazi abalulekileyo kuluntu lwaseSpain.
Inyanga eyaphukileyo (2001)
Yonke into yayingeyonto, uLeonor. Ukumkanikazi kuzalwa (2006)
Ezo ntsuku ziluhlaza (2019).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » UNieves Herrero: iincwadi
30 amabinzana akhethiweyo malunga neencwadi